Thursday, May 5, 2011 Saturday, October 29, 2011 Jenn Lisak Golding
Anyị niile maara na ọ dị oke mkpa maka azụmaahịa na mgbasa ozi mmekọrịta, ma nke ahụ ga-abụ na mkpọsa mgbasa ozi, ahịa mmemme, ma ọ bụ ịde blọgụ banyere uru nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ihe kachasị dị mkpa bụ maka ndị ụlọ ọrụ ndị ahụ, ndị nwere echiche ha na echiche ha (nke ka mkpa, ndị nwere ike igosipụta ha), itinye aka na ịkpalite mkparịta ụka ahụ. A sị ka e kwuwe, ndị mmadụ na ndị mmadụ na-azụkọ ahịa, ha anaghị azụ ahịa. N'ikwu eziokwu ọ bụla, ọ na-esiri ụlọ ọrụ ike ịmegharị ndị ahịa nwere ike ịga nke ọma na ndị ahịa na ntanetị, ọbụlagodi mgbe ha nwere ike ịkpọ oku iji rụọ ọrụ mgbasa ozi ha. Ya mere, olee ụzọ kachasị mfe ma dị irè iji bido mkparịta ụka a?
Commonzọ a na-ejikarị eduzi ndị ọbịa na netwọkụ mmekọrịta bụ itinye akara ngosi mmekọrịta mmekọrịta kwesịrị ekwesị na weebụsaịtị gị ma jikọta ha na profaịlụ nke gị ma ọ bụ ọkachamara. Onye ọbịa ahụ nwere ike ma ọ bụ ghara ịpị na njikọta mmekọrịta gị na ibe gị, yabụ, ọ bụ obere ohere na ha ga-aza / dị ka / soro ndị kachasị ọhụrụ tweet ma ọ bụ biputere. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agụnye njikọta mmekọrịta ọha na eze na mgbasa ozi TV ha, mana ọtụtụ mmadụ na-echezọ kpamkpam banyere azụmaahịa ahụ mgbe ihe ngosi TV ha laghachiri n'ikuku. Yabụ, ọtụtụ ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ anaghị achụpụ okporo ụzọ zuru oke na weebụsaịtị na netwọkụ ha nke ga - eme ka mmụba dị ukwuu na mgbasa ozi mmekọrịta ha ma ọ bụ mmekọrịta. Mana olee ihe onye ọ bụla na-enyocha kwa ụbọchị nke nwere ike ịgba ndị mmadụ ume ịchọta gị ma tinye gị na netwọkụ mmekọrịta ndị a? Email - na nke ahụ bụ ebe mma nke WiseStamp abata n’egwuregwu.
Achọpụtara m banyere WiseStamp ihe dị ka otu ọnwa gara aga mgbe m natara ozi-e site na enyi nke nwere akara ngosi mmekọrịta mmekọrịta na ala nke mbinye aka ha. N'ịchọ ọbụna n'ihu, achọpụtara m na ọ gosipụtara tweet ọhụrụ, nke m nwere ike ịzaghachi, zaghachi, ma ọ bụ soro onye ọrụ site na email ahụ n'onwe ya! Echere m na nke a bụ ụzọ dị egwu iji bido mkparịta ụka; ka mma, ọ dị mfe ma were otu pịa ka m tinye aka. WiseStamp nwere ike arụnyere maka free dị ka a Chrome tinye-na, na ị nwere ike ịgụnye profaịlụ gị maka Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, tinyere ọtụtụ saịtị ndị ọzọ. Agbanyeghị, otu n'ime akụkụ kachasị mma na nke a bụ na ọ bụ nke onwe - ọ bụrụ na m na onye ahịa na-ekwurịta okwu site na email ma ha hụ tweet na-atọ ụtọ m zigara, ha nwere ike ịzaghachi ma ọ bụ soro usoro ahụ n'ihi na ọ dị mfe nnabata. Ọ na-agbakwunye mmekọrịta m na onye ahịa m n'ihi na ha na-amụtakwu banyere m ma ha nwere ndepụta zuru ezu nke ozi kọntaktị na-abụghị nke email. Ọzọkwa, ọ na-agbakwunye uru m ụlọ ọrụ n'ihi na m na-ezisa / tweeting / akwalite ihe anyị na-eme.
Jidere onwe gị na ụlọ ọrụ gị - mepụta mbinye aka email nke "na-akpakọrịta" nkwukọrịta n'ihu.
Onu akara, Nyocha na Buzụta Ihe
Mee 5, 2011 na 3: 31 PM
Daalụ maka nlezianya dị mma.
Naanị obere mgbazi WiseStamp na-arụ ọrụ na Firefox & Chrome n'oge na-adịghị anya ga-agbakwunye Safari & Explorer.
Mee 5, 2011 na 3: 44 PM
Josh - nnukwu ọrụ! Ikekwe ị nwere ike ịmepụta ngwa mgbakwunye maka Postbox (Mac Client)! Naanị m na-ekwu ya n'ihi na ọ bụ ihe m ji use
Mee 5, 2011 na 8: 31 PM
Daalụ maka nkọwa! M na-eji ya maka Chrome, yabụ nke ahụ bụ ihe m maara nke ọma. Daalụ maka inye nnukwu ọrụ.
Mee 5, 2011 na 4: 18 PM
Akwa post, Jenn! Ozugbo m hụrụ email gị, ahụrụ m ya n'anya - ugbu a ọ dị m mkpa ịtọ m!
Mee 8, 2011 na 8: 27 PM
Daalụ maka nyocha nke WiseStamp. M etinyela ya n'ọrụ. Daalụ!
Ọkt 2, 2011 na 1:17 PM
Lelee brandmymail.com ọ na-enye ngwọta zuru ezu maka otu ihe ịma aka nke ịmepụta ntinye aka dị ike na ọdịnaya sitere na netwọkụ mmekọrịta gị / ụlọ ọrụ gị.
Ọkt 2, 2011 na 1:37 PM
Chei - Brandmymail nwere onyinye dị ukwuu! Daalụ maka n'ọnụ!
Mee 1, 2012 na 8: 28 AM
I nwekwara ike iji BrandMyMail http://www.brandmymail.com yiri wisestamp ma jiri njikwa akara email kachasị mma na ndebiri ederede.
Ezigbo ihe atụ http://pinterest.com/brandmymailcom/brandmymail-user-templates/
Mee 19, 2013 na 7: 42 PM
Y’oburu n’acho imeputa ihe kariri ozi email gi nke oma, lelee Mgbanye Ozi Crossware